Garaagarummaan OPDO fi ODP Maali? |
Damee Boruu: Caamsaa 18, 2019
OPDOn yaroo duraa TPLFiin kan bu’ureefamte booji’amtoota RIB Dargiin yoo tahu akeekaa fi kaayyoon TPLF bakkaan gahuuf. Sagantaa mataa ishee waan tokko of harkaa hin qabdu. TPLF maqaa ijaarsa Oromoon Uummata Oromoo burjaajessitee bara dheeraaf bituuf kan itti qophoofte ijaaratte dha. Miseenonni OPDO duraa sun lubbuun isaanii TPLF iin baraaramuuf galata guddaa qabu. Hojiin isaanii itti himamee fi itti kenname hojjechuu qofa malee yaada mataa isaanii kan Uummata Ormoo fayyadu dhiyeessuun hafe kan TPLF fayyaduu iyyuu dubbachuuf gita isaanii miti. “Ofumaa afaan hin baniin”. “Kan sitti kename duwwaa hojedhu” waan jedhamaniif meeshaa TPLF tajaajilu irra adda bahanii akka namaatti hin ilaalaman ture.
Haala kana fakkaatun gad aantummaan akka isaan itti dhaga’amuu gootee jirti. Haala kana irra kan ka’e yaroo ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti dararamaa turan kan hunda caalaa isaan tumu nama dhalootan Oromoo tahe ykn Afaan Oromoo dubbatu akka ture warri lubbuun oolee mana hidhaa keessa bahan himatu. Sababni isaa inni duraa akka natti fakkaatutti TPLFf amanaa tahuu isaanii mirkaneessuuf. Inni lammaffaa aarii TPLF irraa qaban obbolaa fi obboleettii isaanii tumuudhaan olaantummaa sammuu akka hidhamtoota irratti qabaatan waan isaan gargaaruuf. Sababni kun lachuu kan sammuu isaanii jeequ malee afuura boqqonnaa waan isaanii kennu miti.
Sirna mootummaa EPRDF kan ijaaree ofaa jiru TPLF waan tahee waan hunda duraa kan balaalefatmuu qabu TPLF tahun nama dinquu hin qabu. Garuu ilmaan Oromoo kan ajjeessaman, kan hidhaman, kan waxxalaman fi kan saamaman harka OPDOn akka tahe wal nama hin gaaffachisu. TPLF tokko tokko mana qaroo qarree fi qeerroo Oromoo hin beektu. Kan ajjeesuu fi akka hoolaa faasikaa qalmaaf dabarsee kennu OPDO dha.
Guyyaa keessa garuu ilmaan Oromoo boojuu hin taanee miseena OPDO yaroo tahaa dhufan ilaalcha warra booji’amoo duraa irraa adda kan tahe qabaachuu eegalan. TPLF of irraa injifachuun fagoo tahu illee garaa isaanii keessa gaarefachuu jalqabuun hin hafne. Yaroo wajjin garuu of irraa dhiibuuf hawwi warri qaban jiru. Warri saboonota tahanii argaman akkuma ilmaan Oromoo biraa hidhamuu, ajjeessamuu fi biyyaa bahuun ayyaana isaanii taheera.
Bara shanan darban booda kana yaroo qarree fi qeerroon Oromoo nu gahee jedhanii mootummaa EPRDF TPLFiin hoogganamu dura dhaabbatan sabboontonni Oromoo OPDO keessa jiran qabsoo uummatni isaanii gochaa jiruuf gadduu fi yaaduu ifatti jalqaban. TPLF of irraa dhiibuuf hawwii haa qabaatan malee humna ittiin of irraa darban gahaa hin qaban. Kanaafuu wal galteen akka qarree fi qeerroo Oromoo kana qabaneessanii mootummaan EPRDF of qaree akka fudhatma argatu gochuuf walii galateen “Team Lammaan” aangoo akka fudhate tahe.
“Team Lammaa” warri jedhamu kun heereega siyaasaa dulattii fi dogongoraa fudhatee garmaamuu eegale. Utuu dhiigni ilmaan Oromoo dhangala’e hin qooriin irra tarkaanfatanii garee Amhaaraa wajjin akkaata itti aangoo qircatan tilmaama duraa godhatan. Hireen Qeerroo fi Uummatni Oromoo akkuma kaleessa hidhamuu, ajjeefamuu fi saamamuu tahe jira. Haalli isaa baayyee nama gadisiisuu irra darbee dhiiga nama blaqamsiisa. Maaliif kun hunduu tahuu danda’e? Erga Uummatni Oromoo wareegama guddaa baasee jijjirama kana fidee maaliif waan hundaa dura isa balleessan barbaachisa tahe?
Deebiin isaa salphaa dha. Yoo Uummatni Oromoo takkaa injifate deebisanii cabsuun hin danda’amu. Kanaafuu humni Habashaa aangoo barbaadu hunduu ODP wajjin adda tkko dhaabbatanii Uummata Oromoo cabsuu irratti bobba’anii jiru. Humnootni Habashaa bifa adda addan socho’aa jiranii fi midiyaan isaanii lakkobsa hin qabne ABO fi qabsoo uummata Oromoo ololaan maqaa xureessuu yaalli guddaa gochaa jiru. Garuu injifannaa Uummata Oromoo humni dhaabuu danda’u tokko hin jiru. Waan hundaa kan murteessu yaroo dha.
Garaagarummaa ODP fi OPDO maalif isa jedhu deebisuuf waa’ee bu’ureefama OPDO fi yaroo wajjin guddina ishee kaaseen jira. Kana booda gara ODPn deebi’a. ODPn maqaa xuraa’aa dhigaan laaqamee jiru of irraa muluqquu gareen OPDO diqaalaa Habashaa aangoo olaanaa OPDO dhunfate of mogaasite dha. Waan haaraan yoo jiraate namoota saboonummaa Oromoo qabu jedhan of keessaa qulquleessite jirti. Maqaan kun ADP Amhaaraa wajjin kan kinda’e dha. Karaa tokkon lachuu maqaa TPLF isaanii late of irraa buusuuf fakkata. Inni guddaan garuu abbaarsaa ijaarsi isaanii hojjechaa ture dhoksanii akka partii kaleesa biqilee of fakkeessuuf. Yaa Uummata Oromoo hin gowwomnu warri kun warruma umurii isaanii guutuu nu saamaa fi nu ajjeessa ture akka tahan daqiqaa tokkoof dagachuu hin qabnu.
Har’a OPDOn Ummata Oromoo Wallagaa, Boraanaa Fi Gujii komandi postii jalatti bulchaa jirti. RIB kumaata hedduu itti bobbaaftee uumata nagaa ajjeessaa, hidhaa fi saamaa jirti. Mana jiraatotaa gubuu, qabeenya uummataa mancaasuu fi shamaran gudeeduun hojii RIB isa duraa tahee jira. Kana irrati ODPn ijaarsa Amhaaraa ABN (NaMa) jedhamu kan faashitii-Sabbonummaa olaanaan(fascist- Ultra Nationalist) qaba jedhu soortee guddisuudhaan Impaayeera Itoophiyaa jeequmsaaf dhuma hin qabneef qopheesitte jirti. Yaaddoon ABN duraan dursee Uummata Amhaaraaf tahuu qaba. Tokkoffaa naannoo biyya Amhaaraa keessatti nagaan argamuu hin danda’u. Ala bulaa (lawless) tahanii jiru. Kan argan gubuu, saamuu fi ajjesaa jiru. Mootummaa Kononel Abiyis tahe midiyaan Habashaa gochaa isaanii kana dura dhaabbatu hin jiru. Bu’aa hojii isaanii kana yaroo gabaabaa keessatti argatu. Lammaffa waan uummata Impayeera Itoophiyaa keessa jiru hundaaf diina tahaniif uummantni hunduu akka bofaa mataa keesaa waan isaan dhahuuf eessa iyyuu hin gahan. Warra abjuun jiraatu qofa tahuu isaanii utuu hubatanii na qabaa na gadhiisaa jedhanii hin Fagan ture. Sadaffaa uummata Amhaara naannoo adda add jiraataniif wabii tahuun isaanii nama yaaddessa.
Mootummaan Kononeel Abiyi xiyyeefanan isaa inni duraa ABO fi Uummata Oromoo cabsuu tahuu hin qabu natti fakkaata. Eenyu akka isa gorsaa jiru illee waan an beeku hin jiru. Yoo mootummaa irraa turuufis tahe biyyaa kana gara fuula duraa tarkaanfachiisuu humni dhugda isaa itti gatuu fi itti hirkatu ABO fi Uummata Oromoo tahuu qaba ture. Humni Wayyaanee kan Uummata Oromoo hin cabsine inni buddummaa qabaa kan cabsuu danda’u? Karaa biraa hariiroo inni TPLF wajjin qabus biyyichaaf qajeelaa natti hin fakkaatu. Suuta suutaa akka Eritrea fi Itoophiyaa tahuuf deemu. Waan gara lolaa deemaa jiran fakkaatu jechuu kooti. Lolli kamuu kan Uummata Oromoo dabaltee barbaachisaa miti. Warri lolaa folatu kun hunduu dhuma irratti ba’aa isaa(consequences) baatachuuf deemu. ABOn yoo tahe Mootummaa Haayile Silaasee, Mootumma Dargii fi EPRDF irraa baduu ol har’a laphee fi sammuu tokko tokko Oromoo keessa jiru. ABO balleessuun kan danda’amu yoo Uummata Oromoo milliyoona shantama balleessuun danda’ame duwwaa dha. Balleessuu ka’anii ofii baduunis jira.
Previous articleTravel Advisory: Ethiopia – Level 2: Exercise Increased Caution
Next articleSeife Nebelbal Radio, Interviews with Jemal Ebrahim, May 17, 2019
Jogir Abasena May 19, 2019 At 4:44 am
Waraabeesi guyyaas deme halkan waraabeesi sanuma.
Namichatu ganamaan ka’e magaalaa Asmaraa dhaquf jenaan,warrimanaa Issa ciree nyaadhu jette ittoo buqee durakese,jenaan,dhisi magaalaa waanan dhqaa jiruuf achumaan nyaadha jedhe dhiise deme.
Wanta daldalatu daldalate hoteela dhaqee,nyaata ajajachuf me maalqabdu?jedhe gaafannaan,wantajiru tarreesef.Achikeesa,”Zukuuni”isajedhu naafidi jedhe.enno,heddu gomja’etu nyaata haraa ajajadhe jedhe,afaan mimi’efachaa egaa ture.
Yemmu fideefi daboola yk qadaada iraa buqiisu,edaanu,Isa inni ganama dhise bahedha.Boda,ilaaletu”wayi Zukuni,shimkaa Lawutska metsihika!”jedhe lafatti,gad darbate biraa deme jedhama.Haalli ODP/ OPDOs,akkasuma.maqaa male,haala amala,Kan hinjijjirane,waangoo kaldho,holaa uffatte,ergama dinaa bakaan ga’uf as nutti baatedha.
Hardhas,adda dura as baatee,kalacha qabsoo Oroomo,Kan balaalefatuf dura dhaabatu calqabe,ishuma kana.
Kanaaf nyaphii Oroomo guddon dhaabakana.sabakenya,Kan salphise,dhiga ilmaan Oroomo,kandhangalaasiiseefi roriisiise dhaaba kana.Harka dinni qabate,sabakenya ittiin gabroomsu,ulee dinaatii.
“Amallii qareen nama qabe,heruuman namhindhiisu.” jedha Oroomon.
Kanaaf yaa jamaa haadamaqnu,firaaf dina sabakenyaa habeeknu.